Baakadaha & Daabacaadda Wararka iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Wixii waayo-aragnimo wacan fadlan bedel nambarkaaga CHROME, FIREFOX, OPERA ama Internet Explorer.
B2B Wararka & Sheekooyinka
Shirkado cusub Directory
Wax dheeri ah aqriso
Baakadaha & Daabacaadda
June 6, 2020 0 comments
Xirmooyinka Alaabada ee Alaabtaada ah
Adeegyada baakadaha waxaa lagu geyn karaa siyaabo kala duwan sida goobta, boostada ama dirista. U adeegsiga raxan raxan raran ah, qalab iyo shaqaale si hawshani ugu fududaato alaab-qeybiyeyaasha. Alaab-qeybiyeyaasha sidoo kale way isticmaali karaan qalabka kale ee wax lagu baakadeeyo. Kartoonnada iyo mashiinnada wax lagu shubo ayaa loo isticmaali karaa in alaab lagu siiyo macaamiisha. Tani […]Read More
Waxaa laga yaabaa 31, 2020 0 comments
Tilmaamaha Helitaanka Bixiyeyaasha Saxda ah ee Xirmooyinka Xirmooyinka Caagga ah
Iyada oo ay jiraan alaab-qeybiyeyaal badan oo koofiyadaha dhalada ah, way adkaan kartaa inaad hesho meel aad ku kalsoon tahay oo aad ugu tiirsanaato tayada wax soo saarkooda. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo kaa caawinaya inaad hesho alaab-qeybiyeyaal sax ah oo daboolaya baahiyahaaga. Mid ka mid ah su'aalaha ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad weydiiso ayaa ah nooca […]Read More
Ka hel Soo-saareyaasha Wanaagsan ee Baakadaha Daawooyinka ka keena Shirkadaha Dunida oo dhan
Jiritaanka iibiyeyaal badan oo ka kooban Baakadaha dawooyinka ayaa u suurta gelisay soo saarayaasha inay doortaan oo ay rakibaan oo kaliya kuwa tayada sare leh oo qanciya shuruudaha macaamiisha. Si loo helo baakadka ugu fiican, soo saaraha ama qeybiyaha ayaa ku fiicnaan doona inay maraan adeegyada ay bixiyaan shirkadaha sumcadda leh. […]Read More
Waxaa laga yaabaa 30, 2020 0 comments
Waa maxay Soo-saare Baakadaha Kiimikada ah?
Doorka alaab-qeybiyeyaasha baakadaha kiimikada ayaa muhiim u ah guusha ganacsi kasta. Kuwa keena baakadaha kiimikada waxay bixiyaan tiro adeegyo kala duwan ah. Qaar ka mid ah noocyada guud ee adeegyada waxaa ka mid ah sameynta xalka baakadaha kiimikada, wax lagu daro, sumadaha, calaamadeynta iyo dukumintiyada Ganacsiyadu uma baahna inay sugaan illaa inta sheyga la soo saarayo [produced]Read More
Eeg Bixiyeyaasha Jars
Waxaa jira alaab-qeybiyeyaal fara badan oo kala duwan oo halkaa yaal. Hal shirkad ayaa laga yaabaa inay haysato dhalooyinka ugu tayada sareeya adduunka, laakiin ma wada haystaan ​​dhalooyin isku mid ah. Waxaad hubsan kartaa in haddii aad raadineyso weel gaar ah oo aad ugu dabaaldegto qalinjabintaada kuleejka, waxaad ka heli doontaa xaafadda […]Read More
Agri & Mashiinka & Qalabaynta Cuntada
Cabitaanada Aalkolada, Tubaakada & Alaabada La Xiriira
Quruxda & Daryeelka Shakhsiyeed
Dhismaha & Hanti Ma-guurtada
Qalabka & Qalabka korontada
Wax soo saarka Beeraha - Bacriminta, Sunta iyo Seeds
Alaabada Beeraha - Midhaha, Miraha iwm
Alaabta Kalluunka & Kalluunka
Cuntada & Beeraha
Hadiyadaha & Farsamada gacanta
Caafimaadka & Caafimaadka
Ganacsiga Caalamiga ah
Iftiin iyo iftiin
Boorsooyinka & Kiisaska shandadaha
Macdanta & Macdanta
Xafiiska & Qalabka Dugsiga
Wax soosaarka & Cuntada la warshadeeyay & Alaabada
Amniga & Ilaalinta
Kabaha & Qalabka
Cayaaraha & Madadaalada
Dharka & Alaabta Leather
Waqtiga Xilliga Laydhka Indhaha
Xirfadaha & Hiwaayadaha
Bandhigyada Ganacsiga iyo Bandhigyada
Gawaarida & Qalabka
Xi'an Si Aad Ula Socoto Guusha Shenzhen
Kobaca Dhaqaalaha Hoose ee Aagga Gacanka si loo dhibaateeyo Bangiyada
Daryeelka Caafimaadka GE Oo Soo Bandhigay Vscan Air
Xiaomi Saamiyada ayaa kor u kacay 10% Maaddaama Qaadiga Mareykanka uu qaadayo xayiraadaha
Shirkada Diyaaradaha ee Virgin Airline oo Lacag Uruurinaysa
Agri & Mashiinka & Qalabaynta Cuntada Mashiinka Beeraha & Qalabka Cabitaanada Aalkolada, Tubaakada & Alaabada La Xiriira Dharkii Adeegyada Casriga ah ee Dibadda Qaybaha Gawaarida & Qalabka Quruxda & Daryeelka Shakhsiyeed cabitaanka kiimikooyinka Dhismaha & Hanti Ma-guurtada Macmiilka "Electronic" Qalabka & Qalabka korontada Energy Mashiinka Injineerka & Dhismaha Wax soo saarka Beeraha - Bacriminta, Sunta iyo Seeds Alaabada Beeraha - Midho, Miraha iwm Alaabta Kalluunka & Kalluunka Cuntada & Beeraha Mashiinka Cuntada & Cabitaanka alaabta guriga Hadiyadaha & Farsamada gacanta Caafimaadka & Caafimaadka Kaalmada Daryeelka Caafimaadka Home & Garden Qalabka Guriga Dhirtu - Ubaxyo, Dhir & alaabooyin la xiriira Dharka Dhallaanka & Dhallaanka Xoolaha, Digaagga, Hilibka & Wax soo saarka xoolaha Boorsooyinka & Kiisaska shandadaha Makiinado Dharka ragga Macdanta & Macdanta Xafiiska & Qalabka Dugsiga Waxyaabaha kale ee Deegaanka Qalabka kale ee Mashiinka & Warshadaha Baakadaha & Daabacaadda Wax soosaarka & Cuntada la warshadeeyay & Alaabada Rubber & Plastics Amniga & Ilaalinta Daryeelka maqaarka Cayaaraha & Madadaalada Dharka & Alaabta Leather Waqtiga Xilliga Laydhka Indhaha Tools & Hardware Gawaarida & Qalabka
Xuquuqda daabacaadda 2020 © Alietc.com Goobta B2B & Directory, Xuquuqda oo dhan waa la keydiyay. T & C - PP
Ma illowday Password-kaaga?
Dib u cusbooneysii My Account